Qaramada Midoobay Oo Bilaabaysa Ol’ole Taariikhi Ah Oo Daacuunka Looga Ciribtiraayo Gudaha Afrika – Goobjoog News
A man pushes a wheelbarrow containing relief food from a distribution centre in Chirumanzi, 250 km (155 miles) southeast of Harare, January 15, 2009. An estimated five million Zimbabweans, about 40 percent of the population, are surviving on food aid. Donors expect that number to grow, but they are also diverting money from food aid to fight a cholera epidemic that has already killed over 2,100 people and their appeals for more funding are not being met in full. Picture taken January 15, 2009. REUTERS/Philimon Bulawayo (ZIMBABWE) - GM1E51G1J8K01
Qaramada Midoobay iyo isbahaysiga samafalka Gavi ayaa Isniintii si wadajir ah ugu dhawaaqay ol’olihii ugu ballaarnaa abid taariikhda inta la ogyahay ee dadka Qaaradda Afrika looga tallaalayo cudurka Cholera, si cudurka loo xakameeyo daafaha kala duwan ee Qaaradda.
Sida ay sheegtay wakaaladda Wararka AFP, isbahaysiga Gavi ayaa sheegay in la tallaali doono ku dhawaad Laba milyan oo qof oo qaadan doona tallaalka cholera-ha, kaas oo ah mid afka laga qaadanayo, waxaa la qaadi doonaan 5 ol’ole oo kala duwan oo ka bilaabmi doono Malawi, Nigeria, South Sudan, Uganda iyo Zambia, ol’olaha waxaa la soo gabagabeyn doonaa dhammaadka bisha June.
Madaxa Gavi oo la yiraahdo Seth Berkley oo bayaan soo saaray ayaa waxa uu yiri: “Waa falcelin aan horey u dhicin oo lagaga jawaabayo xaaladaha faafitaanka cholera ee daafaha kala duwan ee Qaaradda.”
12 Gobol ama Dowladood oo ku yaalla Koonfurta sub-Saharaha Afrika ayaa la dhibaatoonaya faafitaanka cudurka Cholera, waa sida ay sheegeen Gavi iyo WHO.
Maamulaha guud ee WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay “Tallaalka afka laga qaadanayo waa hubkeenna aasaasiga ah ee dagaalka aan kula jirno Cholera-ha”, isagoo carrabka ku adkeeyey iney lagama maarmaanta tahay in la helo biyo nadiif ah, adeegyada kala duwan ee fayadhowr caafimaad, tababaro loo fidiyo dadka caafimaadka ka shaqeeya iyo in lala shaqeeyo bulshada si looga dhowrsado faafitaanka cudur.
Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa sheegay in Cholera-ha uu haleelay 1,3 Milyan ilaa Afar Milyan oo qof, waxaana sababtiisa u geeriyooda 21,000-143,000 oo qof oo intooda badani ay ka soo jeedaan dowaladaha Faqriga ah.